Tag: email kushambadzira roi | Martech Zone
Tag: email kushambadzira roi
Maitiro Ekunyatso Teedzera Yako Shanduko uye Kutengesa muEndaneti Kushambadzira
Wednesday, April 28, 2021 Wednesday, April 28, 2021 Dmytro Spilka
Email kushambadzira kwakakosha mukushandura shanduko sezvazvaimbove. Zvisinei, vatengesi vakawanda vachiri kukundikana kutarisa maitiro avo nenzira inobatsira. Nzvimbo yekushambadzira yakachinja nekukurumidza mu21st Century, asi mukukwira kwesocial media, SEO, uye zvemukati zvekushambadzira, email mishandirapamwe yakagara iri pamusoro pechikafu cheni. Muchokwadi, 73% yevatengesi vachiri kuona kushambadzira kweemail senzira inoshanda kwazvo
Wednesday, April 28, 2021 Wednesday, April 28, 2021
Sei maemail matsamba achishanda?
China, December 6, 2012 Chipiri, Zvita 4, 2012 Douglas Karr
Ini munguva pfupi yapfuura ndakatumira yangu yekutengesa yekutarisa pamhepo uye imwe yemazano ane hukuru hwekutanga kushambadzira neemail. Email kushambadzira ichine kudzoka kwakanyanya mukudyara, mutengo wakaderera wekupinda, uye ndeimwe yeakashoma tekinoroji matekinoroji akasara kune vashambadziri kuti vasvike kune avo vazvinyore. Email kushambadzira inoshanda - isu tese tinoziva izvo asi ingani yako email tsamba tsamba yakakosha kusangano rako? Iwe unonzwisisa chii
Thursday, December 6, 2012 Tuesday, December 4, 2012
Zviwanikwa maringe neRuzivo
China, January 1, 2009 Muvhuro, Ndira 1, 2018 Douglas Karr
Ini zvakaitika kune vhidhiyo yaTony Robbins paTED yaive yakanaka kukurudzira. Mumwe wemitsetse yake wakanyatsorira chokwadi neni pachangu: Zviwanikwa zvichipesana neKugonesa Imwe yemabasa anogutsa kwazvo andakambove nawo kuve weKubatanidza Mubatsiri weExactTarget. Panguva iyoyo, ExactTarget yaive neyakaganhurirwa application programming interface (API) asi vedu vatengi vaikura mukushambadzira uye otomatiki. Mazuva ese kwaive kusangana nemutengi aive ne
Thursday, January 1, 2009 Monday, January 1, 2018